Libuyele eNkantolo eNkulu elokubulawa kweJaji | Isolezwe
Libuyele eNkantolo eNkulu elokubulawa kweJaji
Isolezwe / 7 August 2012, 12:02pm / SAPA
Cape Town 06-08-12 -Thandi Maqubela, on trial for the alleged murder of her husband, Acting Judge Patrick Maqubela arrives at the labour court Picture Brenton Geach
LIQALILE futhi izolo eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape icala lokubulawa kweJaji laseNkantolo eNkulu uPatrick Maqubela. Obhekene naleli cala ngumkakhe uNkk Thandi Maqubela kanye nosomabhizinisi uVela Mabena owayenza umsebenzi wokusabalalisa imikhiqizo yezempilo.
Bobabili bayaliphika icala lokubulala iJaji uMaqubela ngoJuni 2009. Izolo ubufakazi bethulwe yimenenja yakwa- Vodacom uPetra Heynecke obechaza ngemiyalezo yeselula nezinombolo ezabe zifonelwa kusetshenziswa amaselula amabili. Ebufakazini bakhe akazange anike imininingwane egcwele yemiyalezo noma izinombolo ezabe zishayelwa. Ubefakaza ngokuthi ikhona imiyalezo eyathunyelwa phakathi kukaMabena noNkk Maqubela kanjalo nomyeni wakhe ngaphambi kokuba abulawe.
Phakathi nobufakazi ummeli kaMaqubela uMarius Broeksma usukumile echitha lobu bufakazi ethi abuliyisi ndawo leli cala. “Uma umbuso unezizathu ezithile ngalobu bufakazi, angazi mina ukuthi kungaba yiziphi,” kusho ummeli uBroeksma.
IJaji lithe kumele kuqhutshekwe nabo lobu bufakazi emuva kokuba uMshushisi uPedro van Wyk ethe bubalulekile futhi buyingxenye yecala.
Umbuso uthe iJaji uMaqubela waklinywa encishwa umoya waze wafa kanti ummeli kamma-ngalelwa uNkk Maqubela uthe iJaji lashona ngendlela ejwayelekile yokugula.